Xilliga Guga Xilliga Gu'ga: Waa maxay goorma ayayna dhacdadan dhacdaa? Saadaasha Shabakadda
Sawir - Radiotierraviva.blogspot.com.es
Dhulkeenu weligiis isku taagnaan maayo isku qorraxda marka loo eego Qorraxda: markay ku meeraysato hareeraheeda oo ay isku rogrogto, waxaan ku raaxeysan karnaa habeen iyo maalin, iyo sidoo kale isbeddelada kala duwan ee dhaca maalinta oo dhan. kolba bilaha ayaa sii socda.
Laakiin bani'aadamku had iyo jeer wuxuu ubaahanyahay inuu magacaabo waxwalba, sidoo kale maalinta xiisaha leh ee ay kujiraan saacado isku mid ah iftiinka habeenkii oo loo yaqaan 'equinox'. Waxay kuxirantahay waqtiga sanadka uu dhacayo, waxaan dhahnaa waa dayrta dayrta ama equinox guga. Munaasabaddan, waxaan ka hadli doonnaa tan dambe.
1 Waa maxay iskufilanku?
1.1 Goorma ayey dhacdaa?
2 Waa maxay equinox-ka vernal?
2.1 Had iyo jeer ma waxay ku dhacdaa isla taariikhaha?
3 Maxaa dhacaya inta lagu jiro xinjirta afka?
4 Sidee ayuu u saameynayaa bisha March?
Waa maxay iskufilanku?
Haddaan soo qaadanno etymology, equinox waa eray ka yimid Laatiinka oo macnihiisu yahay "habeen siman". Laakiin markii aan ka hadlayno ifafaalaha, tani run ahaan run ma ahan cabirka qorraxda iyo dabeecadaha jawiga meeraha awgood, taasoo sababi karta inay ku kala duwanaadaan dhererka maalinta meelaha kaladuwan. Haddaba, qeexidda eraygu waa sidan soo socota: waqtiyada sanadka uu boqorka xiddiggu kujiro midig diyaaradda dhulbaraha cirka.
Iyada oo ay ku jirto, isbeddelka sanadlaha ee xilli-ciyaareedku wuxuu ku dhacaa meel kasta oo ka mid ah dhul-beereedka.
Goorma ayey dhacdaa?
Equinoxes waxay dhacaan inta udhaxeysa 20ka iyo Maarso 21 iyo inta udhaxeysa Sebtember 22 iyo 23. Marka laga hadlayo xagga woqooyi, gu’gu wuxuu bilaabmaa maalmahaas bisha saddexaad, iyo dayrta maalmahaas bisha Sebtember; kaliya kasoo horjeedka koonfuurta koonfureed.
Waa maxay equinox-ka vernal?
Sawir - Wikimedia / Navelegante
Xilliga gu'ga waa mid ka mid ah xilliyada sannadka. Waa xilligii aan ka tegi lahayn jiilaalka oo waxaan ku raaxeysan karnaa heerkul dheeri ah oo noqon doona mid aad iyo aad u macaan. Laakiin maxay u dhacdaa? Waa maxay sharaxaadda cilmiyaysan ee ku saabsan ifafaalahaan?
Si looga jawaabo su’aashan waxaa lagama maarmaan ah in waxoogaa laga helo aqoonta cilmiga xiddigiska, waana taas Equinox-ka vernal wuxuu dhacaa marka Qorraxdu ay marto barta koowaad ee Aries, taas oo ah barta barta dhulbeereedka halkaasoo boqorka xiddiggu dhaqdhaqaaqiisa sanadlaha ah ee muuqaalkoodu yahay wareegga -xilliga ugu sarreeya ee cirku tilmaamayo qorraxda cadceedda sannadka dhexdiisa- koonfurta ilaa woqooyi iyadoo loo tixgelinayo diyaaradda dhulbaraha.
Waxyaabaha way yara yara adkaan karaan, maxaa yeelay barta koowaad ee Aries, iyo sidoo kale barta ugu horeysa ee Miisaanka - barta uu xiddiggu u maro isbarbar dhigga Sebtember 22-23 - lagama helin xiddigihii magacyadooda magacaabay. dhaqdhaqaaqa horudhaca ah, taas oo ah dhaqdhaqaaqa ay soo mareen dhidibka wareegga meeraha. Gaar ahaan, qodobka na xiiseynaya markan waa 8 darajo xadka uu la leeyahay Aquarius.
Had iyo jeer ma waxay ku dhacdaa isla taariikhaha?
Haa, dabcan, laakiin maahan waqtiyo isku mid ah. Xaqiiqdii, halka sanadkii 2012-kii ay ahayd 20-kii Maarso 05: 14, 2018-kii waxay noqon doontaa 20-ka Maarso saacaddu markay tahay 16:15.
Maxaa dhacaya inta lagu jiro xinjirta afka?
Sawir - Flickr / Dick Thomas Johnson
Marka lagu daro wixii aan kor ka soo faalloonnay, maalintaas iyo maalmaha ka dambeeya, waddamo badan ayaa u dabaaldega ciidda guga. Waa xilli gaar ah oo sannadka ah oo lagu celceliyo laba-iyo-tobankii biloodba, sidaa darteedna waxay isu rogtaa cudurdaar qumman oo lagu raaxaysto.
Haddii aad rabto inaad ogaato kuwa ugu muhiimsan, halkan waxaa ku yaal liis:
Japan: dalka Jabbaan wuxuu u dabaaldegaa Hanami, oo ah ciidaha lagu xuso laguna fikiro quruxda ubaxyada geedaha cherry-ga ah ama sakuras ee Japan.
Shiinaha: waxay dhacdaa sida saxda ah 104 maalmood kadib Sebtember. Maalintaas waxay maamuusaan awoowayaasha.
Poland: Inta lagu guda jiro 21-ka Maarso waxay sameeyaan dhoolatus aan loo baahnayn sphinx-ka ilaahadda Marzanna, taas oo la xiriirta cibaadooyinka la xiriira dhimashada iyo dib-u-dhalashada dabiiciga.
Mexico: 21-ka Maarso dad badan ayaa u lebisan dhar cad si ay u aadaan goobaha kala duwan ee qadiimiga ah si ay isu nooleeyaan.
Uruguay: sabtiga labaad ee bisha oktoobar, waxaa socod ku soo bandhigaya carwooyin qurxan oo farasku soo jiitay iyagoo fardooleynaya.
Sidee ayuu u saameynayaa bisha March?
Si aan u dhammeeyo, waxaan kuu sheegayaa sida isku-dheellitirka dhaca Maarso uu noo saameynayo, maaddaama ay siyaabo kala duwan u sameyneyso: Halkan dhulkeenna aan jecel nahay, waxyaabo muhiim ah ayaa maalintaas ka dhaca, maxay yihiin:
Cirifka woqooyi maalin bilaabmaysa oo socon doonta lix bilood.
Habeen soconaya lix bilood ayaa ka bilaabanaya South Pole.
Guga waxa uu ka bilaabmaa cirifka woqooyi, taas oo loo yaqaan vernal ama vernal equinox.
Dayrta ayaa ka bilaabmaysa cirifka koonfureed, taas oo loo yaqaanno xilliga dayrta ama dayrta.
Waxaan rajeyneynaa inaad kaheli doontid equinox vernal vern.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Xilliga gu'ga